Sidee loo arkaa isticmaalka RAM-ka ee barnaamijyada Android | Androidsis
Eder Ferreno | | Codsiyada Android, Khiyaamada Android
Codsiyada aan ku rakibnay telefoonka Android waxay cunaan ilo. Waxaan mar walba xakameyn karnaa xaddiga xogta moobilku cuno. Sidoo kale waa suurtagal in la arko codsiyada aan ku khasban nahay batari badan ayaa wax cunaya qalabka. In kasta oo macluumaad muhiim ah ay tahay in la ogaado isticmaalka xusuusta RAM ee barnaamijyadan ay fulinayaan.
Waa xaqiiqo in xaalado badan aan si weyn loo siin fiiro gaar ah, in kasta oo ay tahay wax ay tahay inay tahay mid feejigan. Sidaa darteed, way fiicantahay in la ogaado barnaamijyada aan ku rakibnay Android ka mid ah kuwa cuna xusuusta ugu badan ee RAM. Xaqiiqda oo noqon karta mid aad muhiim u ah.
Sidoo kale, waa wax fiican in la ogaado, maxaa yeelay xaaladaha qaarkood Isticmaalka RAM-ka ayaa laga yaabaa inuu aad u sarreeyo. Taas oo sababi karta in taleefanka uu ka howl galo si ka hooseeya sida caadiga ah. Markasta oo ay sii badato isticmaalka RAM-ka ama uu si buuxda u buuxsamo RAM-ka taleefankeenna Android, ayaa gaabis ah hawlgalku.
Xaaladaha qaarkood, waxaa jira ciyaaro ama habab wax cunaya qaddar badan. Sidaa darteed, mudadaas waa cadahay waxa sababa adeegsiga xusuusta sare. In kasta oo mararka qaarkood codsiyada aan aadka loo aqoon ay yihiin kuwa leh adeeggan sare. Sidaa darteed, waa inaad awood u leedahay inaad hubiso.
1 Sida loo hubiyo isticmaalka RAM-ka ee Android
1.1 On Android 7.1 iyo wixii ka hooseeya
1.2 On Android 8.0 iyo wixii ka sareeya
Sida loo hubiyo isticmaalka RAM-ka ee Android
Waxay kuxirantahay nooca Android ee lagu rakibay, howshu way yara kala duwanaan kartaa si loo ogaado isticmaalka RAM ee barnaamijyada kujira taleefanka ay fulinayaan. Laakiin marna ma aha wax adag. Sidoo kale uma baahnid codsiyo dhinac saddexaad ah. Marka wax dhibaato ah ma qabtid.
On Android 7.1 iyo wixii ka hooseeya
Haddii aad haysato nooca Android u dhigma ama ka hooseeya Nougat, tillaabooyinka la raacayo waa kuwo aad u fudud. Waa inaad marka hore gasho goobaha taleefanka. Markaa waa inaad gal qaybta codsiyada in aan ku jirno goobahan isku mid ah.
Markaa waa inaad furtaa liiska ama dejimaha qaybtaas. Kadib, waa suurtagal in la muujiyo barnaamijyadooda iyadoo loo eegayo isticmaalka ay ka sameystaan ​​xusuusta taleefanka. In sidan, isticmaalka RAM ee ay sameeyeen barnaamijyadan ayaa lagu soo bandhigi doonaa shaashadda. Hab wanaagsan oo lagu hubiyo kuwee ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan.
Marka waxay u badan tahay inaan dooneyno inaan isticmaalno barnaamijyada qaar wax ka yar ama aan u maleyno inay jiraan kuwo laga yaabo inay aad u isticmaalayaan. Waa macluumaad aad u faa'iido badan, oo si fudud oo fudud loogu heli karo goobaha taleefanka. Haddii ay dhacdo in RAM uu 100% degan yahay, waa muhiim in la xiro geedi socodka qaar, si waxqabadkaan gaabiska ah ee Android ee dhaca markay tani dhacdo looga hortago.
On Android 8.0 iyo wixii ka sareeya
Isticmaalayaasha leh noocyadii ugu dambeeyay ee Android, tillaabooyinka la raacayo ayaa ka duwan. In kasta oo iyagu haba yaraatee aysan isku murugsanayn midkoodna. Sida caadiga ah, waa inaad ku bilowdaa furitaanka dejinta taleefanka. Xaaladdan oo kale, xulashooyinka horumariyaha waa in la furaa. Sidaa darteed, haddii aadan horey u haysan, waa inaad aadaa qaybta ku saabsan aaladda oo aad dhowr jeer gujiso lambarka isku-darka.
Marka xulashooyinka horumariyaha la furo, waa inaad gashaa qaybta xusuusta. Markaa waxaa jira qayb taas Waa xusuusta ay adeegsadaan codsiyada. Waa halka ay tahay inaan ka galno kiiskan gaarka ah. Waad ku mahadsan tahay, waxaan awoodi doonnaa inaan aragno waxa loo isticmaalo RAM barnaamijyada taleefannada ay sameynayaan.
Mar labaad, haddii aan aragno in RAM-ka Android-ka la deggan yahay 100%, qalabku wuxuu u shaqeyn doonaa si gaabis ah. Marka waxaa nagu qasbay inaan xirno qaar ka mid ah geeddi-socodka, si markaas ay mar kale si fiican u shaqeyn doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo ogaado barnaamijyadooda u adeegsada RAM-ka ugu badan Android